दुर्गेश थापाले गाडी चलाउँदा कुकुर मारेको खुलासा, क्षमा माग्दै प्रहरीमा मिलापत्र भयो
पटक–पटक विवादित हुँदै आएका गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा अर्को झमेलामा परेका खुलासा भएको छ ।
गत कात्तिक ६ गतेको थापाले चलाएको गाडीले कुकुरलाई ठक्कर दिएर मारेको घटना ढिला बाहिरिएको हो ।
मोडल थापाले चलाएको बा१९च ८९३७ नम्बरको हुन्डाई गाडीले काठमाडौंको बागबजारस्थित श्रेष्ठ टेलरिङभित्र पार्किङमा बसिरहेको कुकुरलाई ठक्कर दिएको थियो । दुर्गेशले पार्किङभित्र आँखा अगाडि नै रहेको कुकुरलाई जोगाउन सकेनन् र कुकुरको मृत्यु भयो ।
गाडीको ठक्करबाट कुकुरको मृत्यु भएपछि पशु अधिकारकर्मी सोभा श्रीले अनामनगर प्रहरी बिटमा उजुरी दिएकी थिइन् । ‘धेरै चर्चित गायक हो उहाँ । उहाँ यो समाजको हिरो हो, यस्तो विषयमा उहाँले मात्तिएर गाडी चलाउने र कुकुर मार्न मिल्छ ? कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गरेका छौं,’ श्रीले भनिन् ।
कुकुरधनी बीरबहादुर बस्नेतले समेत दोषीमाथि कारवाहीको माग गरेका थिए । तर मिलापत्र गरेर आरोपी गायक थापालाई छाडिएको छ । प्रहरीको सिंहदरबार बिटका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले कुकुरधनीले दिएको उजुरीपछि दुवै पक्षलाई मिलापत्र गरेर पठाइएको जानकारी दिए ।
के भन्छन् दुर्गेश ?
लोकान्तरले सम्पर्क गर्दा मोडल दुर्गेशले आफूले देखेर कुकुरलाई ठक्कर नदिएको बताए । दुर्गेशले भने, ‘अब गाडी हाँक्ने बेला अलिकति ध्यान पुर्‍याउने संकल्प गरेको छु ।’
दुर्गेशले एकछिनमा गाडी रोकेर हेरे पनि कुकुर भागिसकेकाले आफू घरतर्फ लागेको बताए । ‘यदि घाइते भएको देखेको भए मैले अस्पताल लैजाने कि कहाँ के गर्ने गर्थें,’ उनले थने, ‘अन्जालमा कतिपय गल्ती हुन्छन्, यो मेरो अन्जानमा भएको गल्ती हो । शुभचिन्तकसँग क्षमा माग्छु ।’
यो समाचार लोकान्तरको लागि रामजी ज्ञवालीले लेखेका हुन् ।